ठुला पांच दलहरूको बैठक सम्पन्न, प्रधानमन्त्रीको प्रश्न मोर्चा निर्वाचन मा सहभागी भए दुइ चरणमा चुनाव गराउन सकिन्छ? – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
ठुला पांच दलहरूको बैठक सम्पन्न, प्रधानमन्त्रीको प्रश्न मोर्चा निर्वाचन मा सहभागी भए दुइ चरणमा चुनाव गराउन सकिन्छ?
बैशाख ६, २०७४ ०६:१४ मा प्रकाशित
इसरोकार संवाददाता ६ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी मोर्चालाई कसरी सहमतिमा ल्याउने र कसरी चुनाव सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख पाँच दलका शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा बुधबार बिहान बालुवाटारमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको छ ।